Nin miisaanka culeyskiisa ahaa 150 kg oo maanta ah 75 kg, hadaba muxuu sameeyey?… – Hagaag.com
Nin miisaanka culeyskiisa ahaa 150 kg oo maanta ah 75 kg, hadaba muxuu sameeyey?…
Posted on 22 Maajo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Hamid Ayuub oo u dhashay Urdun ayaa muddo dheer heysatay mushkilada cayilka laga soo bilaabo yaraantiisa, wuxuu aad u cuni jiray cuntada ku badan tahay sonkorta, wuxuu qabay qabtiin sonkor ama cunto kama ahaan karin si kastaba.
Ugu dambeyntii wuxuu miisaankiisa gaaray 150 kg, markaasi ayuu rajo beelay ilaa uu maqlo koorso ku saabsan dadka “cuntada qabatinka qaba” ee magaalada Amman, wuxuu ka qeyb qaatay muddo labo maalmood ah.
Kadibna wuxuu bilaabay safarkii daaweynta ee “dabeecada qabatinka cuntada” wuxuu ogaaday in sababta miisaankiisa u kordho ugu wacneyd labo sababood mid jireed iyo maskaxeed ama nafsi.
Dhiirigelinta jireed waxay aheyd sonkorta, tahina, tan dhiirigelinta dhinaca nafsiga asaga oo aan la macaamileyn dareenka xun iyo cadaadiska nololeed.
Wuxuu raacay barnaamij cunto “diet” oo isku dheeli tiran oo si fiican u maamuleen khubaro ku takhasusay dadka qabatiinka cuntada ku dhaca, halkaasi oo laga helayo dhammaan baahida maalinlaha ah ee jirka, iyo sonkor dabiici ah oo ka soo jeeda miraha ama “fruits”.
Wuxuu soo maray marxalad uu rabay inuu ku noqdo sheekadiisii hore.
Markii la dhameeyey dhibaatadii ugu weyneyd, wuxuu ka takhalusay baruurtii hurdada u diiday,” Allah mahadiis miisaankeyga maanta waa 75 kg, sidaa darteed waxaan dhimay nus”.
” Culaysku wuxuu saameyn ku yeeshay caafimaadkeyga, waxaanan la il darnaa dhibaatooyinka caloosha gaar ahaan mindhicirka, dhidid iyo hurdo la’aan”.
” Waxa ugu muhiimsan ee aan ka bartay safarkeyga maahmaahda “U cun inaad ku noolaatid laakin ha u noolaanin inaad wax cunto”, si wax walba oo nolosha khuseeya ugu raaxaysto, isla markaana maalgeliyey nafteyda”.
-Qaado cuntada inta kugu filan oo ha iska badinin.
-Jimicsi ha moogaanin, haka dhigan dareenka xun iyo cadaadiska nolosha inay kugu riixdo cunto aan caafimaad laheyn.
-Dareenkaaga cabir ee ha is caburinin.
-Hoos u dhiga miisaankiina calaashan caafimaadkiina, waxaad u qalantaan inaad ku noolaataan farxad iyo caafimaad, lagama quusto nolosha.